2014-09-10 @ 19:33 in Ankapobeny
Raha nisy fotoana nalaza ny fitokonan'ny mpianatra teny Ankatso sy ny gidragidra fifampitorahana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana, noho ny gafigafy nataon'ny heverina ho olon-kafa voakarama hanakorontana sy eritreretina fa hamadika ilay tolon'ny mpianatra ho politika, tsy hita intsony ny lavenon'izany ankehitriny satria nisy ny vatsim-pianarana nozaraina. Nisy ny gidragidra toy izany ihany koa teo amin'ny mpianatra any amin'ny farintany fa tsy henoheno loatra ny momba izany amin'izao fotoana izao. Tsy mba toy izany kosa ny an'ny mpampianatra FRAM hatreto. Toe-draharaha mifanohitra amin'izay heverina no hita.
Amin'ny ankapobeny dia mora milefitra ny mpiasa, na ny tsy mpianatra intsony, satria efa mamelom-bady aman-janaka, mbola kely anaka, efa manana fandaniana. Rehefa mihatra hatrany amin'ny tsy fahazoana karama intsony manko ny tolona dia tsy hanana hery hanoherana intsony ny mpikarama. Raha eritreretina tsotra toy izany ny zavamisy dia hatramin'ny volana oktobra no tena ho hita ny herin'ny tolona ataon'ny mpampianatra FRAM mitokona. Efa mba nandre resak'olona ihany aho fa tsy mpampianatra FRAM eto an-drenivohitra no tena mikiribiby manohy ny tolona fa ireo an-tany lavitra ka izay lafiny izay no tsy hanaikinekeny fotsiny izao ny ho resy. Manana olom-pantatra ihany ny tena nanao io asa io fa tena fadiranovana ireo olona ireo, satria mba mampianatra taranaka Malagasy dia manana fahamenarana tsy hangataka an-dalambe fa karazany mitety ireo olona antenainy ho malala-tanana mahatsapa ny andavanandron'izy ireo. Fa tena ontsa dia ontsa ny fo rehefa mieritreritra hoe olona efa lasa "mpangataka" (tsy ankarihary) ve no mpampianatra ny zanakao? na mpampianatra ny maro an'isa amin'ny zanaky ny mpiray tanindrazana aminao?
Noho ny fahitana izany toe-javatra izany dia tsy afaka ny hieritreritra hanesoeso na hanohitra izay fitakiany ny tena. Mariho fa efa an-taonany ireo olona ireo no nitolona ka nahatonga hatrany amin'ny drafitra hampidirana ho mpiasam-panjakana ny 10.000 amin'izy ireo saingy mazava loatra fa tsy hahafa-po azy ireo izany raha miohatra amin'ny isany amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny nanombohan'ny fialan-tsasatra ireo no nihanavitrika satria izay no fotoana tsy ampianarana sy tokony hanaovana ny tolona. Efa nisedra baomba mandatsa-dranomaso izy ireo ary efa niharan'ny fisamborana sy ny herisetra ny iray amin'ny mpitarika amin'izy ireo. Raha izay mpitarika efa nosamborina sy nampijaliana izay no mbola mifikitra amin'ny fanaovana ny tolona (araka ny nahitako azy tamin'ny fahitalavitra) dia efa vonona hatramin'ny farany izy, na manana fikendrena tokoa ny ho tafiditra ho mpiasam-panjakana mazava hoazy.
Rehefa nanao ny fitakiana teo amin'ny minisitera ary izy ireo no voatosi-bohon-tanana dia mazava loatra raha hitodika any amin'ireo olom-boafidy mivantana eto amin'ny firenena (na tena voafidy tokoa ireo na noho ny halabato no nahavoafidy azy ireo). Tsy tokony hatao mahagaga raha nisy ny fikasana hizotra ho any Tsimbazaza hizotra ho eny amin'ny Lapan'ny Antenimieram-Pirenena. Misy lalan-kevitra mazava tsara ao anatin'izany, ka izay no mampihomehy amin'ny zandary teo Ankadilalana tamin'ny nanakanana ny arabe tsy hizoran'ireo olona ireo hoany. Tsy misy tokony hanakananao ny olona hiresaka amin'ny olom-boafidiny ankoatra ny hoe tsy te-handray azy ireo ihany koa ny olom-boafidy atoniny. Hanakana ny fifampiresahana eo amin'ny mpidify sy ny olom-boafidy ve ianao satria hoe mpitandro ny filaminana? Moa ve tsy izany fanakanana ny tsy ifandraisan'ny mpifidy sy ny olom-boafidy izany indray no antsoina hoe fanakorontanana tsy afaka am-bavan'ireto karazan'olona ireto? Tsy handroba ireo ary tsy hanakorontana ka diso toerana ilay fepetra henjana lazaina, fepetra jadona no anaran'izany fa tsy fepetra henjana.
Ny fivoarana hita tamin'ny nataon'ny zandary kosa dia ny tsy nampiasana ny baomba mandatsa-dranomaso tamin'ity fotoana ity fa ny kobay sy ny ampinga no tena novononina. Mazava loatra fa raha resaka fifanosehana dia tsy hitovy ny hery eo amin'ny zatra fanazaran-tena sy mpikotrana lava sy efa nahazoazo habe sy ny olona efa zatra nihafy, manifinify sy fohy ary mifanakaikikaiky ny isan'ny olona. Fa mahalasa eritreritra ny mpitazana kosa ny mahita izany habe sy halava tsy dia mitovy izany, efa fantatra tsinona fa tsy hahavita herisetra na oviana na oviana ny olona efa manambady aman-janaka sy efa tsy mijery ny hoaviny intsony fa efa any amin'ny taranaka indray ny saina. Ny tena kosa moa eto dia ny manoratra ihany no atao mba hisy ny soratra vavolombelona rahatrizay.
Jentilisa, 10 septambra 2014